Mr. Serge Pun - Yangon Hotel Expo 2019
Honorable Speaker of Yangon Then & Now
Mr. Serge Pun @ Theim Wai isaMyanmar national and the Chairman of Serge Pun & Associates (Myanmar) Limited (“SPA”). In 1983, Mr. Pun founded Serge Pun & Associates Limited in Hong Kong SAR and eventually returned to the country of his birth to establish SPA in 1991. In 1992, Mr. Pun established First Myanmar Investment Company Limited (“FMI”) as one of the earliest public companies (unlisted) in Myanmar. Mr. Pun isamember of the World Economic Forum’s ASEAN Regional Strategy Group and ASEAN Regional Business Council. He isastanding member of the Chinese People’s Political Consultative Conference of Dalian andamember of the Asia Business Council. He is the Chair of the International Advisory Board of Singapore Management University for Myanmar, the Vice-Chairman and CEO of New Yangon Development Company (“NYDC”) and served as an Honorary Business Representative for Myanmar of International Enterprise Singapore from 2004 till 2006. Mr. Pun isafrequent speaker in international forums on Myanmar and ASEAN.
Mr.Serge Pun @ ဦးသိမ်းဝေသည် ရန်ကုန်ဇာတိဖြစ်ပြီး FMI ကုမ္ပဏီ၏ အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါသည်။
၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် Mr.Serge Pun @ ဦးသိမ်းဝေ သည် Serge Pun & Associates (SPA) လီမိတက်အား ဟောင်ကောင်မြို့တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် အမိမြေ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာကာ Serge Pun & Associates (Myanmar) Limited (SPA) တည်ထောင်ခဲ့သည်။
၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် SPA ၏ အဓိကမှတ်တိုင်ဖြစ်သော FMI ကုမ္ပဏီအား မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံး အများပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
၂၀ဝ၆ ခုနှစ်တွင် Mr.Serge Pun @ ဦးသိမ်းဝေ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့်် စင်္ကာပူစတော့အိတ်ချိန်း Main Board တွင် Yoma Strategic Holdings လီမိတက်ကို အောင်မြင်စွာ စာရင်းသွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။ FMI ကုမ္ပဏီသည် လည်း ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၅) ရက်နေ့တွင် အသစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း၌ ပထမဦးဆုံးစာရင်းတင်သွင်းနိုင်သော ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၅) ရက်နေ့တွင် ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုဖြစ်သော Memories Group လီမိတက်သည် စင်္ကာပူစတော့အိတ်ချိန်း Catalist Board တွင် အောင်မြင်စွာ စာရင်း တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။
Mr.Serge Pun @ ဦးသိမ်းဝေသည် လက်ရှိတွင် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်၊ အာဆီယံဒေသ အုပ်စုနှင့် အာဆီယံ စီးပွားရေးကောင်စီ၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည့်အပြင် တရုတ်ပြည်၊ တာလျန်မြို့ရှိ ပြည်သူ့အကြံပေး ညီလာခံ၏ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် International Enterprise Singapore ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးဆောင် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ၂၀ဝ၄ ခုနှစ်မှ ၂၀ဝ၆ ခုနှစ်အထိ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။